3 Solutions nkwado ndabere na mpaghara iPhone Notes on Computer
Ndị bụ mgbe niile jupụtara echiche concur na ndị na echiche na-uru arịba ama ala ebe ha nwere ike mfe ga-Ewepụtara. Gara bụ ụbọchị mgbe anyị na-eji ji ede na-ndị echiche na ihe ọ bụla anyị na-eme atụmatụ ime. Ụbọchị ndị a, ekwentị ngwa nwere adia uwe-nwuda na ha na-eme ọrụ mfe karịsịa maka iPhone na Android ekwentị ọrụ. iPhones nwetara ihe edeturu ngwa na-eme anwansi n'ihi na ị ma ndị mkpa ndetu nwere ike akwụsị mgbe ọ bụla ị na-eme mmegolite. Iji zere nke a, ihe kasị mma ime bụ ndabere na ndetu na a na kọmputa. Ya mere, ihe ndị kasị mma ụzọ mezuo nke a?
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone data mgbake) na-ahaziri na ọrụ nke na-agbake ehichapụ ọdịnaya site ọ bụla iOS ngwaọrụ si n'ebe. Ọ na-enye àgwà mgbake ọrụ na-ekwe ka ndị ọrụ na-naghachi faịlụ site na iOS ngwaọrụ ozugbo ma ọ bụ site na iCloud ma ọ bụ itunes ndabere. The ịma mma bụ na software dakọtara na ọbụna ndị ọhụrụ iOS ngwaọrụ-ya nanị na-enye zuru ngwọta ebe na-elekwasị anya na àgwà. Iji nyefee ndetu si a ngwaọrụ onye ebe nchekwa e ehichapu, ị ga-awụnye a software mbụ.
Nzọụkwụ 1: Wụnye na ẹkedori Wondershare Dr.Fone maka iOS
Ị nwere ike nweta a ikpe mbipute si download buttons n'okpuru. The ezi ihe bụ na ọ bụ dakọtara na iPhone 6, iPhone 6 Plus, iOS 9 na ọtụtụ ndị ọzọ na nsụgharị nke iphones. Ihe mbụ ị ga-mkpa ime bụ hụ na ị ibudata version dakọtara na OS ị na-agba-Windows ma ọ bụ Mac. Nzọụkwụ ọzọ bụ iji wụnye software na ẹkedori ya. Jikọọ ekwentị gị na kọmputa na i arụnyere na software na-eji a USB ụdọ.
Nzọụkwụ 2: iṅomi iOS Ngwaọrụ na Zọpụta Notes gị na kọmputa
Nzọụkwụ na-esonụ bụ họrọ otu mgbake mode dabere na ebe gị na ndetu ndabere na-echekwara. Ọ bụrụ na ị ga-achọ naghachi Notes si ngwaọrụ ozugbo. Họrọ naputa site na iOS Ngwaọrụ wee pịa na iṅomi.
Chere maka usoro ga-agwụ agwụ na interface ngosipụta edemede gbakee. Pịa ego na udi aha ya bụ Notes.
Pịa na Naghachi ịzọpụta gị ndetu gị na kọmputa.
Dakọtara na niile IOS ngwaọrụ
Ike ga-eji na ma Mac na Windows
Onye nwere ịzụta ka na-zuru atụmatụ
Jiri Leawo IOS Data Recovery Ngwá Ọrụ
Nke a bụ ngwá ọrụ na eguzobewo onwe ya n'etiti ndị kasị mma IOS data mgbake software. The software bụghị nanị nnọọ irè-anapụta àgwà ọrụ ke n'ógbè nke iPhone ka kọmputa faịlụ nyefe. Iji nke a software nyefee gị ndetu gị PC, ị ga-mkpa budata ma wụnye ya na lekwasịrị kọmputa mbụ. The software bụ free ibudata na-agbalị si www.leawo.org
E nwere ihe abụọ nhọrọ ịhọrọ site na-Mac na Windows pụtara na ị ga-ahọrọ na-adabere na lekwasịrị kọmputa ị ga-eji. Ozugbo i ebudatara, wụnye software na ẹkedori ya. Jikọọ gị IOS ngwaọrụ na iji eriri USB na kọmputa na pịa Malite na etiti nke software interface.
The software ga-amalite nyochasịrị ngwaọrụ na categorize ọdịnaya maka gị. Mgbe iṅomi na-kwụsị, ị ga-12 edemede na ekpe sidebar nke ngwá ọrụ. Pịa ego na Notes.
Pịa na Naghachi.
Họrọ ebe nchekwa ịzọpụta ndetu na kọmputa gị. Pịa na Go ịzọpụta Notes na ọnọdụ.
A bit oké ọnụ
Jiri Syncios Nyefee Software
A bụ ihe ọzọ ngwá ọrụ nke karịrị echiche na okwu nke na-enye ọrụ àgwà IOS faịlụ transfer ọrụ. Ị nwere ike iri uru nke ya arụmọrụ site na iji ya nyefee Notes si gị iPhone ka a PC. Akpa ihe mbụ na dị nnọọ ka ndị ọzọ na abụọ ngwá ọrụ, ị ga-download software gị PC iji ya. Iji mee otú ahụ, download software si http://www.syncios.com na wụnye ya na kọmputa gị. Nzọụkwụ ọzọ bụ ẹkedori software na jikọọ na gị iPhone na iji eriri USB-gị na kọmputa. Na ulo oru interface, pịa ọmụma na ekpe sidebar-esochi Notes na nke abụọ menu mmanya.
Pịa na nkwado ndabere na mpaghara họrọ Notes si nhọrọ na-egosi. Agagharị na ọnọdụ ị ga-achọ ịzọpụta ndetu wee pịa na ndabere na ị na-ọma na-aga!
Fast na faịlụ transfer
Nwere ike ghara ikwe abụọ ụzọ transfer
Dị ka ọchịchị nke mkpịsị aka, mgbe hụ na ị na ndabere gị ndetu mgbe ọ bụla ị imelite ha dị nnọọ iwelata Ohere nke adịkwa ndị mkpa ndetu bụrụ na nke a nsogbu, unu Iphone. Nke a dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ na ụdị onye na-eme dị mkpa ọdịnaya na ndị a ndetu.
Atụmatụ na usoro na Iweghachi iPhone
32 Bara Uru Aghụghọ na i nwere ike iji na gị iPhone / iPad
Olee otú ele ehichapụ Messags on iPhone 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Olee otú Bipute Notes si iPhone 5 / 4S / 4 / 3GS
> Resource> iPhone> 3 ngwọta na-ndabere iPhone ndetu na kọmputa